Hetsika - Fikambanan'ny ivon-toerana manoratra iraisam-pirenena
Ny Fikambanan'ny Ivotoerana Manoratra Iraisam-pirenena dia misy hetsika efatra isan-taona hampifandraisana ireo mpikambana ao aminay ary hanomezana hery ireo manam-pahaizana momba ny foibe fanoratana.
Fihaonambe isan-taona (isaky ny fararano)
Ny kaonferansa fianjerantsika dia hetsika lehibe indrindra natrehintsika tamin'ny taona niarahana tamin'ny mpanatrika 600-1000 + nandray anjara tamin'ny fampisehoana, atrikasa ary latabatra nandritra ny telo andro. Ny kaonferansa fanao isan-taona dia hetsika fandraisana olona marobe ho an'ny mpampianatra foibe fanoratana vaovao sy efa za-draharaha, manam-pahaizana ary matihanina. Eto.
Ivotoerana fahavaratra (isaky ny fahavaratra)
Ny Ivon-toeran'ny fahavaratra anay dia atrikasa maharitra maharitra maharitra hatramin'ny 45 ka hatramin'ny matihanina foibe fanoratana 5 hiara-miasa amin'ireo manam-pahaizana / mpitarika foibe fanoratana efa za-draharaha 7-XNUMX. Ny Summer Institute dia toerana manomboka tsara ho an'ireo talen'ny foibe fanoratana vaovao.
Herinandron'ny ivon-toeram-panoratana iraisam-pirenena (isaky ny volana feb)
The Herinandro IWC nanomboka tamin'ny taona 2006 ho fomba iray hanehoana ny asan'ny foibe fanoratana (sy ny fiderana). Ankalazaina isan-taona manodidina ny fetin’ny mpifankatia izany.
Fiaraha-miasa @ sugg (isaky ny lohataona)
Ny fiaraha-miasa iray andro dia fihaonambe mini-fanao isan-taona ny Alarobia alohan'ny hanombohan'ny CV (Fihaonambe momba ny Composition & Communication Communication). Mpandray anjara manodidina ny 100 no misafidy amin'ireo fotoam-pivoriana miaraka amin'ny lohahevitra ivon-toerana fanoratana. Ny mpanentana sy ny mpanatrika dia ampirisihina hampiasa ny Fiaraha-miasa hahazoana valiny sy aingam-panahy amin'ireo tetikasa izay eo am-pamolavolana.
Te-hanatratra ireo mpanatrika sy mpikambana ato aminay? Manohana hetsika!
Te hampiantrano hetsika IWCA ho avy? Mijery ny seza misy anay.